Bogga ugu weyn » Warshadaha Maraakiibta » Xaakimku wuxuu baabi'inayaa amarka CDC 'shiraaca shuruudaysan' ee khadadka dalxiiska
Xaakimku wuxuu baabi'inayaa amarka CDC 'shiraaca shuruudaysan' ee khadadka dalxiiska
Amarku wuxuu dhaqan gelayaa bisha Luulyo 18, xilligaas oo amarada CDC ee la siinayo hawlwadeennada dalxiiska loo tixgelin doono tixgelinno aan ku xirneyn, talooyin ama tilmaamo, sidaa darteed maraakiibta dalxiiska ayaa dhowaan ka shaqeyn doona Florida mar kale.
Badhasaabka Florida wuxuu ku dhawaaqay guushii CDC.
Florida waxay ku dacweysay CDC waxyeello aan laga soo kaban karin ka dib markii qaar ka mid ah khadadka dalxiiska ay ku hanjabeen inay gobolka ka baxayaan
Garsooraha Degmadda Mareykanka wuxuu ogolaaday codsigii Florida ee ahaa in laga hor istaago amarka “shuruud ku xidhka shuruudda” ee CDC
Badhasaabka Florida Ron DeSantis ayaa shalay guul weyn ka gaadhay maxkamada ka dhan ah Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, markii xaakimka degmada Mareykanka Steven Douglas Merryday uu ogolaaday codsigii Florida ee ahaa in laga hor tago CDC Dalab “shiraac shuruudaysan” oo ka dhan ah khadadka dalxiiska shalay.
"CDC way khaldanayd muddadii hore, wayna ogaayeen," ayuu yiri DeSantis oo ku dhawaaqay go'aanka.
“CDC iyo maamulka Biden waxay diyaariyeen qorshe ay ku quusinayaan warshadaha dalxiiska, iyagoo ku gabanaya dib u dhaca xafiisyada iyo dacwadaha. Maanta, waxaan u xaqiijineynaa guushan qoysaska reer Florida, warshadaha dalxiiska, iyo gobol kasta oo doonaya inuu ilaaliyo xuquuqdiisa iyadoo lala kulmayo xad gudub federaal oo aan horay loo arag. ”
Florida waxay dacwad ku soo oogtay CDC dhibaato aan laga soo kaban karin ka dib markii qaar ka mid ah khadadka dalxiiska ay ku hanjabeen inay ka tagayaan gobolka sababo la xiriira xaalado culeys iyo culeys badan oo la soo rogay bishii Oktoobar 2020 lana cusbooneysiiyay Abriil. Waxyaabaha kale, CDC waxay u baahan tahay hawlwadeenada dalxiiska inay ka dhisaan shaybaarro wax lagu baaro markabka, dib-u-sameeyaan nidaamyada hawo-mareenka, ayna leeyihiin ugu yaraan 98% shaqaalaha iyo 95% rakaabka - oo ay ku jiraan carruurta - la tallaalo si looga gudbo shuruudaha markab dalxiisyada loogu talagalay marka hore.
Xukun 124-bog ka kooban ayaa umuuqday mid loogu talagalay in looga hortago baaritaanka maxkamada sare, tixraacayo garsoorayaal badan, horumaro wareega, kiisaska iyo sharciga qaanuunka, iyo xitaa taariikhda CDC iyo karantiillada. Xaakim Merryday wuu ka gaabsaday fahamka CDC ee awoodiisa, si kastaba ha noqotee, isagoo tilmaamay in qareennadooda ay si isdaba joog ah u qeexeen "faafitaan" xitaa hal tusaale oo ah gudbinta fayraska bini-aadamka.
Marka sidaas la sameeyo, CDC waxay sheeganeysaa awood inay ku soo rogto waddanka oo dhan tallaabo kasta oo ay doonto ha noqotee, iyadoo lagu saleynayo kaliya helitaankiisa agaasinkeeda ee caqli-galnimada ah "daruuriga," ayuu qoray Merryday, isaga oo ugu yeeray "sheegasho naxdin leh, aan horay loo arag, oo si qoto dheer oo keligood ah awood sheegasho ah.
Garsooraha ayaa qoray: "Mid ayaa lalayaabayaa," ayuu garsooraha qoray, in CDC ay isku dayi laheyd "in guud ahaan la joojiyo galmada" Maraykanka si looga hortago gudbinta AIDS-ka, waraabowga ama herpes. "Digtooni siyaasadeed (iyo dhibaatada fulinta) ayaa laga yaabaa inay ka waanin CDC mamnuucistaan ​​gaarka ah, laakiin qaynuunka, sida ay fahansan tahay CDC, dhab ahaantii ma horkeenayo wax caqabad ah," ayuu yiri ka hor inta uusan u dhaqaaqin inuu diido fahamkaas.
Merryday ayaa xitaa soo xigatay xukunkii May ee saaxiibkiis DC, Xaakim Dabney L. Friedrich, kaas oo ku xirnaa kaliya 20 ama bogag laakiin wuxuu ku dooday xuquuqda CDC ee ah in lagu soo rogo joojinta waddanka oo dhan ka saarista kireystayaasha dambiileyaasha ah.
In ka badan 13 milyan oo rakaab dalxiis iyo shaqaale ah ayaa ka amba baxay ama ka degay Florida sanadkii 2019, iyagoo ilaalinaya dhaqaalaha gobolka. Soo noqoshada warshadaha markabku waxay noqon doontaa “taariikh muhiim u ah dagaalka xorriyadda,” ayuu raaciyay DeSantis, isagoo tilmaamay in Florida “ay sii wadayso inay horumar sameyso iyadoo ganacsiga u furan.”